Abụ Ọma 110 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Eze na onye nchụàjà dị ka Melkizedek
‘Chịwa n’etiti ndị iro gị’ (2)
Ụmụ okorobịa ndị wepụtara onwe ha dị ka igirigi (3)
Abụ Devid. 110 Jehova gwara Onyenwe m, sị: “Nọdụ ala n’aka nri m+Ruo mgbe m ga-eme ka ndị iro gị bụrụ ihe i ji agbakwasị ụkwụ.”+ 2 Jehova ga-eme ka ọchịchị gị* si na Zayọn ruo n’ebe ndị ọzọ. Ọ sịrị: “Gaa meriwe n’etiti ndị iro gị.”+ 3 Ndị gị ga-eji obi ha wepụta onwe ha n’ụbọchị i du ndị agha gị na-eje agha. Ìgwè ndị na-eto eto* na-akwado gị. Ha dị ka igirigi nke na-ada n’isi ụtụtụ. Ha dị nsọ, maakwa mma n’anya. 4 Jehova aṅụọla iyi, ọ gaghịkwa agbanwe obi ya.* Ọ sịrị: “Ị bụ onye nchụàjà dị ka Melkizedek,+Ị ga-abụkwa onye nchụàjà ruo mgbe ebighị ebi.”+ 5 Jehova ga-anọ n’aka nri gị.+ Ọ ga-ebibi ndị eze n’ụbọchị iwe ya.+ 6 Ọ ga-ekpe mba dị iche iche ikpe ma taa ha ahụhụ.+ Ọ ga-eme ka ozu ju n’ala ahụ niile.+ Ọ ga-ebibi onye na-achị* ala buru nnukwu ibu.* 7 Ọ* ga-aṅụ mmiri n’iyi dị n’ụzọ. N’ihi ya, ọ ga-eweli isi ya elu.
^ Na Hibru, “ga-esetị mkpanaka nke ike gị.”
^ Ma ọ bụ “Ìgwè ụmụ okorobịa.”
^ Ma ọ bụ “ọ gaghịkwa akwa ụta.”
^ Na Hibru, “onyeisi.”
^ Ma ọ bụ “ụwa niile.”
^ Ya bụ “Onyenwe m” e kwuru okwu ya n’amaokwu 1.